Myanmar OA6: April 2007
Posted by Mr.Pooh @ မောင်ပွတ် at 4:05 PM 1 comments
အိုအေစစ်ကို လမ်းကြုံ၍ဖြစ်ဖြစ်၊ တကူးတကဖြစ်ဖြစ် လာရောက်လည်ပတ်ကြကုန်သော Blog Reader များခင်ဗျား - ကျွန်တော် Mr.Pooh (မ ၉၉ ခေါ်သလို မောင်ပွတ် ဆိုလည်းရပါတယ်ဗျာ) ဟာ ရုံးအလုပ်များ၊ Computer ရှေ့တွင်လုပ်မရသော ကိုယ်ရေးကိုယ်တာများ၊ မီးအလွန်ပျက်ခြင်းများကြောင့် Post အသစ်တင်ခြင်းမှ အတော်အတန်ကင်းဝေးနေခဲ့ပြီး နောက်ထပ်လည်း ရက်အတန်ကြာ ကင်းဝေးနေနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ကျွန်တော့် စာတိုပေစများကို ဖတ်ရှုလိုပါက ခတ္တမျှ သည်းခံစောင့်ဆိုင်းပေးကြပါရန် တောင်းပန်လိုက်ရပါတယ်။ ပြန်ရေးဖြစ်တာနဲ့ တကယ့်စာကောင်းစာခန့်များ၊ သေလုမျောပါးရယ်ရသော ဟာသများ၊ ဘာပြောချင်မှန်းမသိသော ဆောင်းပါးများ၊ ထောင်စော်နံသော စကားများ၊ အရိုက်ခံရနိုင်သော ဝေဖန်မှုများ၊ ကာရံနရီမပါသော ကဗျာများဖြင့် အရင်လို ဆက်လက်ဒုက္ခပေးသွားမှာ ဖြစ်ကြောင်းပါခင်ဗျား....
Posted by Mr.Pooh @ မောင်ပွတ် at 9:46 AM6comments
Posted by Mr.Pooh @ မောင်ပွတ် at 9:15 PM 10 comments
Posted by Mr.Pooh @ မောင်ပွတ် at 12:41 PM5comments
Posted by Mr.Pooh @ မောင်ပွတ် at 4:03 PM3comments
ကျွန်တော်တို့တွေ မိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းတွေဆီကို စာရေးတဲ့အခါ တခါတလေ အောက်ဆုံးမှာ P.S ဆိုပြီး စာကြွင်းလေးတွေ ရေးတတ်ကြပါတယ်။ မှာစရာရှိတာ ကျန်နေရင်ဖြစ်ဖြစ်၊ စချင်နောက်ချင်ရင်ဖြစ်ဖြစ်၊ “မောင့်ကိုချစ်တယ်နော်” လို့ ရေးချင်ရင်ဖြစ်ဖြစ်ပေါ့လေ။ ကျွန်တော့်မှာ အဲဒီ P.S နဲ့ပတ်သတ်ပြီး စုထားတဲ့ စာအုပ်လေးတစ်အုပ်ရှိတယ်။ အမေက သားသမီးတွေဆီကို ရေးတဲ့ P.S လေးတွေပါ။ ရေးထားတာတော့အများကြီးပေါ့။ ကောင်းနိုးရာရာလေးတွေကို ပထမပိုင်းအနေနဲ့ တင်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့လည်း သားသမီးတွေပဲ မဟုတ်လားဗျာ ...
တကယ်လို့များ သူတို့ကားမောင်းစဉ်လေးမှာ ငေးကြည့်နေမယ့်သူ တစ်ယောက်မှမရှိဘူးဆိုရင် မာစီးဒီးကားကို ဘယ်နှစ်ယောက်ကများ ဝယ်စီးပါတော့မလဲ ?
မင်းကိုချစ်တဲ့ ... မေမေ
သိပ္ပံပညာမှာရော၊ ဖန်တီးမှုအနုပညာတွေမှာပါ ခမ်းနားကြီးကျယ်သော ပြီးမြောက်အောင်မြင်မှုတွေဟာ ပါဝင်သူ တစ်ဦးချင်းစီရဲ့ ပြုလုပ်ဆောင်ရွက်မှုတွေကြောင့်သာ ပြီးမြောက်ခဲ့တာပါ။ ဘယ်ပန်းခြံမှာမှ ကော်မတီအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုခုကို ရည်ညွှန်းပြီး ထုလုပ်ထားတဲ့ ပန်းပုလက်ရာဆိုတာမျိုးမရှိပါဘူး။
ထိုင်နေရင်းနဲ့ အောင်မြင်မှုရသွားခဲ့တဲ့ တစ်ခုတည်းသော သာဓကလေးကတော့ ကြက်မပဲရှိပါတယ်သား။
သတင်းစာတစ်စောင်က Research လုပ်ဖူးတယ်။ ဘယ်သူတွေဟာ အပျော်ဆုံးလူတွေလဲ ဆိုတာကိုပေါ့။ နှစ်သက်စရာ အဖြေလေးခုရခဲ့တယ်လေ။
- တစ်ခုခုကို သေချာကောင်းအောင်လုပ်ပြီးတော့ လေလေးချွန်နေတတ်တဲ့ လက်မှုပညာရှင် ဒါမှမဟုတ် အနုပညာရှင်တစ်ယောက်။
- သဲရဲတိုက်လေးတည်နေတဲ့ ကလေးငယ်တစ်ယောက်
- ကိုယ့်ရင်သွေးငယ်ကို ရေချိုးပေးနေတဲ့ မိခင်တစ်ယောက်
- ခက်ခဲတဲ့ ခွဲစိတ်မှုတစ်ခုပြုလုပ်ပြီး အသက်တစ်ချောင်းကို ကယ်လိုက်တဲ့ ဆရာဝန်တစ်ယောက်
သားသတိပြုမိမှာကတော့ ငွေ၊အာဏာနဲ့ ပိုင်ဆိုင်မှုတို့ဟာ ဒီအဖြေတွေထဲမှာ တစိုးတစိမှ တွေ့မှာမဟုတ်ဘူး ဆိုတာကိုပါ။
St.Louis ကိုသွားတဲ့လမ်းမှာ မေမေအကြိုက်ဆုံး ဘန်ဘာစတစ်ကာစာတမ်းလေးကတော့
“ သင်ဟာတကယ်လို့ မှားယွင်းတဲ့လမ်းကြောင်းကို ဦးတည်မိပြီဆိုရင် ဘုရားသခင်က ဂငယ်ကွေ့ပြန်ကွေ့ဖို့ ခွင့်ပြုပါတယ်” တဲ့။
မကြာခင်မှာ အပိုင်း ၂ - ၃ တို့ကို ရေးပေးပါဦးမယ်။
Posted by Mr.Pooh @ မောင်ပွတ် at 3:11 PM2comments
Posted by Mr.Pooh @ မောင်ပွတ် at 12:33 PM7comments
ဒါလေးတွေကတော့ Mr.Pooh ရဲ့ သင်္ကြန်လက်ဆောင်ပါ။
“ မြူမှောင်ဝေကင်း ” သီချင်းကို ခုချိန်မှာ နားမထောင်ချင်တဲ့သူများ ရှိဦးမလား ?
ကျွန်တော်တို့ခေတ်ရောက်မှ ပေါ်လာတဲ့သင်္ကြန်သီချင်းတွေထဲမှာတော့ ဒါအကောင်းဆုံးထင်ပါတယ်။ မျိုးကျော့မြိုင်ရဲ့ အမှတ်တရသင်္ကြန်ကို နားဆင်ပါ။
Myanmar Cupid ကတင်ဆက်ထားတဲ့ ယနေ့သင်္ကြန်ပါ။
Posted by Mr.Pooh @ မောင်ပွတ် at 1:32 PM2comments
အပေါင်းအသင်းတို့ရေ - စေတနာကြီးမားတဲ့ နိုင်ငံတော်အစိုးရကြောင့်ရတဲ့ မဟာသင်္ကြန်ရုံးပိတ်ရက်ရှည်ကြီးဟာ မနက်ဖြန်ဆိုစပါတော့မယ်။ ၁၀ ရက်တိတိပိတ်မယ်လို့ သတင်းစာထဲမှာပါတဲ့ကြေငြာချက်မှာ အစိုးရရုံးပိတ်ရက်လို့ရေးထားတဲ့အတွက် ကိုယ်ပိုင် Company တွေကပိတ်ရမလို၊ မပိတ်ရသလို ဖြစ်နေတယ်လို့ သိရပါတယ်။ ဒါနဲ့ပတ်သတ်ပြီး ဒီတပတ်ထုတ်7Days ဂျာနယ်မှာ အလုပ်သမားဝန်ကြီှးဌာနက အရာရှိတစ်ယောက်ရဲ့ ပြောကြားချက်ကို ကိုးကားပြီး မျက်နှာဖုံးသတင်းအဖြစ် ဖေါ်ပြပေးထားပါတယ်။ အဲဒီအရာရှိက “ အစိုးရကပိတ်ရက်အဖြစ်ကြေငြာခြင်းမှာ အများပြည်သူအလုပ်ပိတ်ရက် လို့ပါပါတယ်။ ဒါကြောင့် စက်ရုံ၊ အလုပ်ရုံ၊ ကိုယ်ပိုင် Company အားလုံးအကြုံးဝင်ပါတယ်။ နိုင်ငံအဝှမ်းအားလုံးအနားရတဲ့ ပိတ်ရက်ဖြစ်ပြီး ဒီရက်မှာအလုပ်ဆင်းခိုင်းရင် လုပ်အားခ ၂ ဆပေးရမှာပါ။ မရရင် တိုင်ကြားနိုင်ပါတယ် ” လို့ရှင်းပြပေးထားပါတယ်။ ကျွန်တော်လုပ်နေတဲ့ Company ကတော့ပိတ်ပြီးသား။ အပေါင်းအသင်းတို့ရော ... ပြည့်ပြည့်ဝဝအနားရကြရဲ့လားဗျာ ...
ဘေးအန္တာရာယ်ကင်းရှင်းပြီး ပျော်ရွှင်စရာကောင်းတဲ့ မဟာသင်္ကြန်ရက်များကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေကြောင်း ဆုတောင်းရင်း ငြိမ်းချမ်းပြည့်စုံတဲ့ နှစ်သစ်တစ်ခုကို ဖြတ်သန်းနိုင်စေကြောင်းထပ်ပေါင်းဆုတောင်းလိုက်ပါတယ်။
Posted by Mr.Pooh @ မောင်ပွတ် at 11:04 AM 1 comments
Posted by Mr.Pooh @ မောင်ပွတ် at 11:16 AM4comments
ကိုကျော်လင်းဆီမှာ ကိုယ်ပိုင် Keyboard လက်ကွက်လုပ်နည်းလေး တစ်ခုတွေ့တယ်။ Unicode အတွက် တော်တော်လေးအသုံးဝင်ပါတယ်။ ဒါလေးကို လေ့လာကြည့်ကြပါစို့။
Posted by Mr.Pooh @ မောင်ပွတ် at 5:14 PM0comments
ဟာသအဟောင်းလေးတစ်ပုဒ်ပါ။ မဖတ်ရသေးရင်တော့အသစ်ပေါ့လေ။ Scan ဖတ်ပြီးသားလေးရလို့ အဆင်သင့် တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။
Posted by Mr.Pooh @ မောင်ပွတ် at 12:23 PM 1 comments
ဒီအချိန်ဆို ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ရန်ကုန်ရွှေမြို့တော်မှာ သင်္ကြန်ရနံ့လေးတွေ စရလာပါပြီ။ မနေ့ကစလို့ အင်းလျားလမ်းမှာ မဏ္ဍပ်တွေ စတင်ဆောက်လုပ်ကြပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ ပုံမှန်ဆောက်လုပ်နေကြ မဏ္ဍပ်တွေဖြစ်တဲ့ Banna Club, Extreme, D-Tanggu, YGN စတဲ့ မဏ္ဍပ်များကတော့ နေရာယူပြီးလို့ ကြော်ငြာ ဆိုင်းဘုတ်ကြီးတွေ ခန့်ခန့်ညားညား ဆိုက်ထူထားကြပါပြီ။ မဏ္ဍပ်နေရာများကို လေလံဆွဲရလို့ မနှစ်ကထက် ပိုမိုဈေးကြီးလာကြောင်းကိုလည်း သူငယ်ချင်း Organizer တစ်ယောက်က ပြောပါတယ်။ သစ်ဈေးကအစ ကြီးမြင့်လာတဲ့အချိန်မှာ မဏ္ဍပ်ဆောက်လုပ်ရေးသမားတွေကလည်း အင်းလျားလမ်း လမ်းမပေါ်မှာပဲ ခုံလေးလုံးလောက်ချပြီး ရုံးခန်းလေးတွေ လာဖွင့်ထားကြပါတယ်။ သူ့သစ်နဲ့သူ မဏ္ဍပ်ဆောက်ပေးမယ်၊ ရေသွယ်ပေးမယ်၊ ပြီးရင် ဖျက်ပြီးပြန်ယူပေးမယ်... စတဲ့ စရိတ်ငြိမ်းဝန်ဆောင်မှုတွေပေးပါတယ်တဲ့။ လက်သမားရှာရခက်တဲ့ သူငယ်ချင်းတွေအတွက်တော့ တကယ်အဆင်ပြေပါတယ်။ လွန်ခဲ့တဲ့ သုံးနှစ်လောက်က အင်းလျားနဲ့အပြိုင် ခန့်ညားတဲ့မဏ္ဍပ်ကြီးတွေနဲ့ စည်ကားခဲ့တဲ့ ဆရာစံလမ်းကတော့ နည်းနည်းလေးတိတ်ဆိတ်နေပါသေးတယ်။ တက္ကသိုလ်ရိပ်သာလမ်းဟောင်းမှာလည်း မဏ္ဍပ်ကြီးတွေ စတင်ဆောက်လုပ်နေပါပြီ။ ပြည်လမ်းက Htoo Company မဏ္ဍပ်ကတော့ တော်တော်စောစော ကတည်းက စတင်ဆောက်လုပ်နေပြီ ဖြစ်ပြီး Emperor တီးဝိုင်းနဲ့ တွဲဘက်ဖျော်ဖြေမှာပါ။ Air Bagan, Myanmar Shopping Mall စတဲ့ Htoo Company လက်အောက်ခံ Company Branch ၉၀ က ဝန်ထမ်းတွေ ရေပက်ကစားဖို့ ရှိပါတယ်။ Iron Cross ကတော့ တိရစ္ဆာန်ရုံအနီးက ကန်တော်ကြီးပတ်လမ်းမှာ Myanmar Beer နဲ့ နေရာယူပါလိမ့်မယ်။ မြန်မာနံပတ် ၁ ဂီတာကျော် ဆရာ ချစ်စမ်းမောင်ကတော့ “ သူများတွေပျော်တာကိုကြည့်ပြီး ဂီတာတီးလာရတာ နှစ်ပေါင်းမနည်းတော့ပါဘူးဗျာ။ ရေလည်းမပက်ရဘူး။ ကိုယ့်ကိုပက်မှာလည်း ကြောက်နေရတယ်။ Electric တွေနဲ့ဆိုတော့ ရေစိုရင် ဓါတ်လိုက်မှာစိုးလို့ပါ ” လို့ ဂျာနယ်တစ်စောင်ကို ပြောပါတယ်။ IC က L လွန်းဝါလို Real IC မဟုတ်တဲ့ အဆိုတော်တွေကိုလည်း သီဆိုဖျော်ဖြေဖို့ ထည့်သွင်းကြေငြာထားပါတယ်။ နာမည်ရထားသူတွေက တစ်နေ့ ၂ ကြိမ် ဆိုရမှာဖြစ်ပြီး Newbie တွေကတော့ ၃ ကြိမ်အထိ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်လို့ လည်းသိရပါတယ်။ (ဆက်လက်ရှာဖွေ ဖေါ်ပြပေးပါဦးမယ်)
Posted by Mr.Pooh @ မောင်ပွတ် at 1:54 PM0comments
သန်းနဲ့ချီပြီးရှိနေတဲ့ Blog တွေထဲမှာ မြန်မာ Blog လေးတွေလည်း အနည်းဆုံးတော့ သောင်းဂဏန်းလောက် ရောက်နေလောက်ပါပြီ။ တချို့ Blog တွေကတော့ မြန်မာ Blogger တွေအကြားမှာ စံနမူနာယူစရာ၊ နေ့စဉ်ဖတ်စရာ Blog တွေအဖြစ် နေရာရနေကြပြီဖြစ်ပါတယ်။ တကယ်လည်း ပြောင်ပြောင်မြောက်မြောက် ရေးနိုင်ကြသလို သူများကိုလည်း ဖေးဖေးမမကူညီတတ်ကြပါတယ်။ ဒီ Post လေးမှာတော့ အဲဒီလို မြန်မာ Blogger တွေရဲ့ Banner မှာ၊ ဒါမှမဟုတ် Nick နဲ့ Profile တွေမှာရေးထားတဲ့ Slogan လေးတွေကို နာမည်နဲ့ ယှဉ်တွဲဖေါ်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ ကျွန်တော် Blog စရေးကတည်းက နမူနာယူရတဲ့
ကိုမောင်လှ Blog ကပဲ စလိုက်ရအောင်လား ...
မောင်လှ = အစွဲအလမ်းကြီးတဲ့ မန္တလေးသား
နိုင်းနိုင်းစနေ = ငါဟာ ဟိုး........အဝေးက ကြယ်ကြွေလေး တစ်ပွင့်ရဲ့ မျက်ရည်တစ်စက်ပါ.......
သံလွင်အိပ်မက် = သံလွင်ကို အိပ်မက်တဲ့အခါ ငါတို့ရဲ့ တေးသွားကိုကြားလိမ့်မယ်
မေဓါဝီ = တွေးမိတွေးရာ ... ရေးမိရေးရာ
သန့်စင်အောင် = Avoidance of Double Taxation!
မျိုးကျော်ထွန်း = Memories of Random Thoughts
Phoxin = First to go, Last to know
ကလိုစေးထူး = ဟိုး ... ရှေ့မှာ ပန်းတိုင်ရှိတယ်၊ လာ ... သွားကြစို့
သီဟကျော်ဇော = My Prospect
Emotional Corner = ခံစားမိသမျှ
အရူးလွယ်အိတ် = လေနှင့်အတွင် လွင့်နေသော၊ စည်းများအပြင်ရောက်နေသော၊ အတောင်ပံ မရှိသည့်ငှက်တစ်ကောင် (သို့မဟုတ်) အရူးတစ်ယောက်
ပန်းပွင့်လေး = My Diary
ကျော်မင်းထွန်း = ငါ့ကိုအိမ်ပြန်ဖို့ တောင်ပံတစ်စုံပဲပေးပါ
မီးသော်ကြီး(ရေသည်မမ) = ရေသည်မမရဲ့ စိတ္တဇအတွေး
ဘိုးစိန် = အင်တာနက်ရပ်ဝန်း သတင်း အနုပညာ သိပ္ပံ အစုံအလင်
ညီလင်းဆက် = Myanmar Blog, Nothing But My Unforgettable Memorials
Opera = ဆုံဆည်းရာမှ ကြိုဆိုပါတယ်
အာလူး = Cool links, funny texts and jokes
ဖတ်ရတာရင်းနှီးအောင် Nick တွေအရှေ့မှာ (ကို)၊ (မ)၊ စသည်ဖြင့်တွေ မထည့်ပေးလိုက်ပါဘူး။ မလေးစားလို့ မဟုတ်ဘူးနော်။ :P
Posted by Mr.Pooh @ မောင်ပွတ် at 12:50 PM2comments
ကျွန်တော်ဖြေထားတဲ့ ဝင်ခွင့်စာမေးပွဲတစ်ခု ပြီးခဲ့တဲ့ တနင်္လာနေ့က အောင်စာရင်းထွက်တယ်။ ထင်တဲ့အတိုင်းပါပဲ။ မအောင်ပါဘူး။ ညနေပိုင်းမှာ အစ်မတစ်ယောက်က ဒါလေးတွေသီးသန့်ရေးထားတဲ့ Email လေးပို့လာတယ်။ ကျွန်တော် ကြိုးစားပြီးတော့ ဘာသာပြန်ထားပါတယ်။
ရှုံးနိမ့်မှုဆိုတာ အောင်မြင်မှုဆီသွားတဲ့ လှေခါးထစ်လေးတွေမှန်း မသိခင်အထိတော့ ငါဟာ ရှုံးနိမ့်မှုတွေကို ထိတ်လန့်ခဲ့ပါတယ်။
ငြင်းဆိုပယ်ချခံရခြင်းတွေဟာ ကိုယ့်ကိုကိုယ် ယုံကြည်မှုတည်ဆောက်ရာမှာ အတော်လေးအသုံးဝင်ကြောင်း မသိခင်အထိတော့ ငါဟာ အပယ်ခံရမှာကို သိပ်ကြောက်ခဲ့ပါတယ်။
နာကျင်မှုတွေဟာ ကြီးထွားရင့်ကျက်မှုအတွက် လိုအပ်ကြောင်း မသိခင်အထိတော့ ငါဟာ နာရမှာကို စိုးရိမ်ခဲ့တာပေါ့။
လိမ်ညာကွယ်ဝှက်ခြင်းရဲ့ ဆိုးကျိုးတွေမမြင်ခင်အထိတော့ ငါဟာ အမှန်တရားကို ရင်မဆိုင်ရဲခဲ့ပါဘူး။
ဘဝဆိုတာ ကိုယ်ရဲ့ကြိုးစားမှုပေါ်မှာပဲ မူတည်တယ်ဆိုတာ သတိမထားမိခင်တုန်းကတော့ ငါ့ဘဝဟာ ကြောက်စရာကောင်းတဲ့ နေ့ရက်တွေချည်းပါပဲ။
အမုန်းဆိုတာကလည်း လျစ်လျူရှုထားရကောင်းမှန်း မသိခင်အထိတော့ အမုန်းဆို ငါကသိပ်ကြောက်ခဲ့ပါတယ်။
လှောင်ပြောင်နှိမ့်ချမှုဆိုတာ ကိုယ့်ကိုကိုယ်ရယ်ရကောင်းမှန်းမသိခင်အထိတော့ ကြောက်စရာကောင်းခဲ့ပါတယ်။
နေ့စဉ်နေ့တိုင်း အသိပညာတွေ ရနေတယ်လို့ သတိမထားမိခင်ကတော့ အသက်တစ်ရက်ကြီးလာရမှာကို ကြောက်ခဲ့မိပါတယ်။
ကိုယ်တွေးနေမှသာ ကိုယ့်ကိုနာကျင်အောင် လုပ်နိုင်မှန်းမသိခင်ကတော့ အတိတ်ဆိုတာကလည်း ငါ့အတွက်တော့ ကြောက်စရာပါ။
အနာဂတ်ဆိုတာ အခုငါပိုင်ဆိုင်လာတဲ့ အချိန်ပိုင်းလေးတွေမှန်းမသိခင်ကတော့ အနာဂတ်ဆိုတာကြီး ရောက်လာမှာကို သိပ်ကြောက်ခဲ့ပါတယ်။
ဒါလေးတွေပါပဲ။ ကဲ ... ဘာကိုများကြောက်နေရဦးမှာလဲ။
Posted by Mr.Pooh @ မောင်ပွတ် at 12:41 PM 1 comments
Blog မှာ ကဗျာလေးတွေ မတင်ဖြစ်တာကြာပါပြီ။ အခုတော့ တစ်ပုဒ်လောက်ထပ်ဖတ်ကြည့်ပေးပါဦးနော်။
Posted by Mr.Pooh @ မောင်ပွတ် at 1:22 PM3comments
ကဲ... သင်္ကြန်ဆိုတာကြီးတော့ နီးလာပြန်ပြီဗျာ။ ဘယ်လောက်ပူပူ ရေပက်သွားမယ့်သူ၊ ရေပက်ခံမယ့်သူတွေကတော့ ပြင်ဆင်နေလောက်ကြပါပြီ။ ကျွန်တော့်သူငယ်ချင်းတစ်ချို့လည်း အင်းလျားမှာ မဏ္ဍပ်ထိုးဖို့နေရာလိုက်၊ Sponsor လိုက်နေကြလေရဲ့။ သင်္ကြန်နီးရင် လူတွေစုံစမ်းကြတာလေးတစ်ခုရှိသေးတယ်ဗျ။ ဘယ် Band က ဘယ်မှာတီးမလဲ ဆိုတာပါ။ ရှာဖွေပြီးဖေါ်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
လေးဖြူမပါတော့တဲ့ Iron Cross ကတော့ Myanmar Beer မဏ္ဍပ်မှာ အငဲ၊ မျိုးကြီး၊ Lလွန်းဝါ၊ တင်ဇာမော် စတဲ့ လက်ကျန် IC တွေနဲ့ကြဲပါလိမ့်မယ်။ Emperor ကတော့ Levis ဘိုးတော်ကြီး ဇော်ဝင်းထွဋ် ခေါင်းဆောင်ပြီး နာမည်ကျော် Htoo Int'l Company မဏ္ဍပ်မှာပါတဲ့။ ကိုဥက္ကာနဲ့ ကိုနိုင်ဇော်ရဲ့ Lazy Club ကတော့ တောင်ကြီးက ကမ္ဘောဇဘဏ်မဏ္ဍပ်မှာ ရှိပါလိမ့်မယ်။ သူတို့အဖွဲ့က ဒါပြီးရင် Singapore ရောက် ရွှေများရဲ့ “ စ ” သင်္ကြန်ကို Apr 28 အရောက်ခရီးဆက်ပါဦးမယ်။ ရောသမမွှေရဲ့ DJ.Jay ကတော့ YGN မဏ္ဍပ်မှာ လက်စွမ်းပြမှာပါလို့ သိရပါတယ်။
လောလောဆယ်တော့ ဒီလောက်ပဲစုံစမ်းသိရှိရပါသေးတယ်။ နီးကပ်လာရင်တော့ ဖောင်ပိတ်သတင်းလေး နည်းနည်းပါးပါးရှာဖွေပြီး တင်ပြပေးပါဦးမယ်။ ဘယ် Model တွေဘယ်မှာ၊ ဘယ်မဏ္ဍပ်ကတော့ Cocktail ကို Chivas နဲ့ဖျော်မှာ၊ ဘယ်မဏ္ဍပ်ကတော့ တုတ်တွေ၊ ဓါးတွေ ဆောင်ထားပြီ ... စသည်ဖြင့်ပေါ့လေ။
Posted by Mr.Pooh @ မောင်ပွတ် at 12:43 PM0comments
Posted by Mr.Pooh @ မောင်ပွတ် at 10:07 AM0comments